शयनकक्षदेखि भान्सा सम्म : सज्जा ? - Yohosamachar
May 30, 2020 May 30, 2020 योहो समाचार	0 Comments
लकडाउन नभइदिएको भए सायदै हामीले घरभित्र यति लामो समय व्यतित गर्ने थियौं । अहिले हामी सबैजसो घरभित्रै समेटिएका छौं । यसरी बसिरहँदा हामीले आफुलाई घामपानीबाट बचाउने घरलाई अरु नजिकबाट नियाल्न पाएका छौं । यतिबेला कतिपयले त घरको आन्तरिक सज्जालाई ध्यान दिएका होलान्, कतिपयले कोठाका सरसामानहरु व्यवस्थित गरिरहेका होलान् । घरभित्रै बसिरहँदा हामीलाई घरभित्रको सजिलो वा असजिलो थाहा हुन्छ । कमीकमजोरी थाहा हुन्छ ।
खासमा घर त्यही हो, जहाँ मन बस्छ । अतः घरको आन्तरिक सज्जाले यसमा खास भूमिका खेल्छ । घरभित्रको वातावरण कस्तो हुनुपर्छ ? आन्तरिक सज्जा कसरी गर्नुपर्छ ?
भान्साको आन्तरिक सज्जा
भान्सामा धेरैजसो समय गृहणीले विताउँछन् । भान्साको समय भनेको साँझ र विहान हो । भान्सामा अलि उज्यालो रंग, चहकिलो बिजुली उपयुक्त हुन्छ । भान्साको साजसज्जा यस्तो हुनुपर्छ, जसले गृहणीलाई अकर्षित गर्न सकोस् ।
भान्सामा जसले काम गर्छ, उनको लागि अनुकुल होस् । उनीहरु भान्सामै रमाउन सकोस् । भान्सा सफा, खुला, उज्यालो हुनुपर्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर भान्साको आन्तरिक सज्जा तयार गरिन्छ ।
शयन कक्षाको आन्तरिक सज्जा
शयन कक्षा अर्थात बेडरुमको सज्जा फरक हुन्छ । बेडरुम भनेको नितान्त तपाईंको व्यक्तिगत कोठा हो । यसमा तपाईंको मनोभाव अनुसार सजावट गर्न सकिन्छ । तपाईं के गर्नुहुन्छ, के रुचाउनुहुन्छ ? ति कुरा तपाईंको बेडरुममा झल्काउन सकिन्छ ।
बेडरुम जहाँ हामी रातको समय विताउने गर्छौं । अर्थात सुत्नका लागि प्रयोग गर्छौं । यहाँ धेरै सामाग्रीहरु अर्थात फर्निचर राख्नु हुँदैन । खुला र शान्त देखिनुपर्छ । त्यसैले बेडरुममा इनडोर प्लान्ट लगाउनु उपयुक्त हुँदैन । किनभने रातको समयमा बोट बिरुवाले अक्सिजन लिने र कार्वनडाइअक्साइड निकाल्ने गर्छ । यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्न सक्छ ।
वैठक कोठाको आन्तरिक सज्जा
लिभिङ रुम अर्थात वैठक कक्ष । यो कोठाको प्रयोग हामीले कसरी गरिरहेका हुन्छौं ? अक्सर पाहुना आउँदा राख्ने । पाहुनालाई चिया दिने । जबकी वैठक कोठाको महत्व अर्कै छ ।
वैठक कोठा अन्य कोठाभन्दा ठूलो राखिन्छ । बैठक कोठामा टेलिभिजन, सोफा, टेबल आदि राखिन्छ । खासमा यो कोठा भनेको पाहुना आउँदा वा भेटघाट गर्ने कोठा मात्र होइन, पारिवारिक जमघट हुने ठाउँ हो ।
हामी अहिले व्यस्त छौं । एकै छानोमुनी बस्ने परिवारका सदस्यसँग पनि हाम्रो भेटघाट वा भलाकुसारी भइरहेको हुँदैन । त्यही कारण हाम्रो परिवारवीच अन्र्तक्रिया भइरहेको हुँदैन । आपसी छलफल भइरहेको हुँदैन । त्यसैले कतिपय अवस्थामा हामीवीच मनमुटाव हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रिरहेको हुन्छ । वैठक कोठा भनेको चाहि परिवारका सबैजना भेला हुने । कुराकानी गर्ने । रमाइलो गर्ने । क्वालिटी समय विताउने ठाउँ हो ।
त्यसैले बैठक कोठाको आन्तरिक सज्जा यस्तो हुनुपर्छ, जसले परिवारका सबै सदस्यलाई आकर्षित गर्न सक्छ । हजुरबा, हजुरआमा, नाता–नातिनी, बुवाआमा, छोराछोरी सबैजना त्यहाँ रमाउन सक्नुपर्छ । सबैका लागि अनुकुल हुनुपर्छ ।
यसरी सबै जनालाई आकर्षित गर्ने किसिमले वैठक कोठाको आन्तरिक सज्जा एवं डिजाइन गरियो भने सबैजना त्यहाँ भेला हुन्छन् । परिवारका सदस्यहरुले क्वालिटी टाइम विताउँछन् ।
यसरी कोठाको आवश्यक्ता अनुसार नै आन्तरिक सज्जा गर्नुपर्छ ।
हरेक घरमा बालबालिका हुन्छन् । अक्सर हामीले डिजाइन गर्दा वा आन्तरिक सज्जा तयार गर्दा उनीहरुको मनोविज्ञानलाई बुझ्ने कोसिस गर्दैनौं । जबकी यी सबै कुरा वालमैत्री हुनुपर्छ ।
कुन किसिमको सजावटमा बालबालिका आकर्षित हुन्छन् ? कस्तो सजावटले उनीहरुलाई सहज बनाउँछ , कसरी गरिएको डिजाइनले उनीहरुलाई बाधा पुग्दैन ? यावत् कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ ।
हामीले प्रयोग गर्ने कमोड, वाथटब, धारा, डाइनिङ टेबल बच्चाहरुलाई असहज लाग्न सक्छ । त्यसमाथि उनीहरुले आफ्नो अप्ठ्यारो बताउन सक्दैनन् । यसरी आन्तरिक सज्जा एवं डिजाइनमा ध्यान नदिदा बालबालिकाहरुले आफ्नै घरलाई असहज मानिरहेका हुन्छन् ।
घरको डिजाइन बालमैत्री हुनुपर्छ । उनीहरुले नै घरमा बढी समय विताउने भएकाले त्यहाँको आन्तरिक सज्जाले उनीहरुलाई प्रफुल्ल तुल्याउनुपर्छ ।
अनलाइनखबर इन्टेरियर डिजाइनर अर्चना शाहसँगको कुराकानीमा आधारित
← थप १८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या १४०१ पुग्यो
गर्भावस्थामा अपनाउनैपर्ने सावधानी →
निरोगी जीवनको तीन सूत्रः उचित आहार, विहार र विचार
June 3, 2020 June 3, 2020 योहो समाचार	0
Total Visit : 14191